कागजातको FidoSysop अभिलेख » साइबरस्पेसमा BBS दिनहरूबाट!
कागजातको FidoSysop अभिलेख
साइबरस्पेसमा BBS दिनहरूबाट!
फिडोनेट र बीबीएस
BBS लगइन मेनु
बीबीएस टेलनेट भ्रमण
जब SysOps ले शासन गर्यो
बीच क्याम हलिवुड FL
NEF Eagles लाइभ स्ट्रिम
SWF ईगल्स लाइभ स्ट्रिम
डोनाल्ड जे ट्रम्प तथ्य
चुनाव 2020 विचार लेख
फ्लोरिडा विशिष्ट राजनीति
राजनीतिक पूर्वाग्रह सेन्सरशिप
कागजातको FidoSysop अभिलेख | ब्लग गृह पृष्ठ
Doc को FidoSysop अभिलेखमा स्वागत छ। म MS-DOS दिन फिडोनेट नेटवर्क कम्प्यूटर बुलेटिन बोर्ड प्रणाली अपरेटर (SysOp) प्रो-वेबमास्टर र ब्लगर बनेको छु, साइबरस्पेसमा टेकको साथ राख्दै ह्याङ्ग आउट गर्दैछु। 2400 बाउड मोडेमको साथ अनलाइन जाँदा समय निश्चित रूपमा परिवर्तन भएको छ! 😎
सेन्ट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडामा जन्मेको, म प्रारम्भिक '50s देखि एक राम्रो ओले दक्षिणी केटा हुँ। किशोरावस्थामा, मैले रेडियो र टिभीहरू ठीक गर्न सिकें। स्कूल पछि स्थानीय ट्याक्सी-क्याब ग्यारेजमा पनि ह्याङ आउट भयो, कारहरू कसरी ठीक गर्ने भनेर सिक्दै। 1972 मा म सबैभन्दा कान्छो राज्य-लाइसेन्स प्रयोग गरिएको कार डीलर बनें, पुराना कारहरू किन्न र तिनीहरूलाई पुन: बेच्न पुनर्स्थापित। पछि जीवनमा, जब अटोमोटिभ रेफ्रिजरेन्टहरू खरीद गर्न ASE र MACS प्रमाणपत्र आवश्यक पर्‍यो (Freon R-12), म प्रमाणित भएँ र अटो एयर कन्डिसनरहरू ठीक गर्नमा विशेषज्ञता प्राप्त गरें। 1991 मा Doc's Place Fidonet BBS को पुरानो IBM PC 286/8 क्लोन प्रयोग गरेर स्थापना गरिएको थियो। यसको अन्तिम सफ्टवेयर अपडेट 1997 मा थियो जब यसलाई www वा टेलनेटबाट पहुँच अनुमति दिन परिमार्जन गरिएको थियो। त्यसबेला यसको दुर्लभ रूपमा प्रयोग हुने डायल-अप लाइनहरू हटाइयो। कागजातको स्थान bbs आज पनि अनलाइन छ यद्यपि यो मोबाइल-अनुकूल छैन न त इन्क्रिप्शनलाई समर्थन गर्दछ। प्रयोगकर्ता नाम/पासवर्ड अतिथि/अतिथि हो लग इन गर्न र धेरै दिन अघिको बारेमा सम्झना।
प्रारम्भिक वाइल्डक्याट संस्करण5कम्प्युटर बुलेटिन बोर्ड प्रणाली HTML इन्टरफेस, थप जानकारी यहाँ छ.
टेक्नोलोजीमा द्रुत गतिमा भएको प्रगतिले फिडोनेटलाई अन्धकार युगमा ढिलो दयनीय मृत्यु मर्न छोडेको छ। यहाँ एक छ bbs टेलनेट टुर स्क्रिन भिडियो 2016 मा उत्पादन गरिएको कागजातले साइटको टेलनेट पहुँच सुविधाहरू कार्यमा देखाउँदै। इन्टरनेट मेनुले नेटमा कहीं पनि बाहिर जाने टेलनेट जडानहरूलाई अनुमति दियो। कागजातको स्थान bbs ले GUI द वाइल्डक्याट नेभिगेटर पनि देखाएको छ जसले मोडेम मार्फत प्रणालीमा डायल गर्दा वेब सर्फिङलाई अनुमति दिन्छ। Wildcat संस्करण5अहिलेसम्म विकसित भएको सबैभन्दा उन्नत bbs सफ्टवेयर थियो!
कागजातको स्थान BBS अनलाइन टेलनेट मुख्य मेनु जुन पुरानो डायल-अप मोडेम टर्मिनल प्रोग्राम जस्तै देखिन्छ।
वर्षौंको दौडान, मैले मेरो एक समयको गौरवको मातृभूमि बकवास भइरहेको देखेको छु! लोभी राजनीतिज्ञहरूले अमेरिकालाई बेचेका छन्। एक पटक गर्व अमेरिकी शहरहरू बस्तीमा परिणत भयोतिनीहरूका राजनीतिज्ञहरू अझ समृद्ध र शक्तिशाली भए। श्रम सस्तो भएको ठाउँमा व्यवसायहरू विदेशमा सर्दा हाम्रो मातृभूमि अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ। दक्ष अमेरिकी कामदारहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका छन्, जसले गर्दा कठिन समयहरू र गति फोरक्लोजरहरू र सवारी साधनहरू पुन: प्राप्तिमा सेटिङ गरिएको छ। कर्पोरेसनहरूले छोडेका अमेरिकी कामदारको बारेमा कसैले वास्ता गरेन!
मलाई करिब एक दशकअघि राजनीतिमा रुचि भयो र भोट हाल्न दर्ता गर्दा फाइदा हुने निर्णय गरें। धेरै अमेरिकीहरू जस्तै धेरै वर्ष पहिले, मैले सोचें कि राजनीतिज्ञहरू सबै बदमाश थिए, र मतदानले दुईवटा खराबीहरू मध्ये कम छान्दै थिए। तर 2015 मा, एक धेरै सफल गैर-राजनीतिज्ञ अमेरिकी व्यापारीले राष्ट्रपतिको लागि दौडमा अगाडि बढे जसको अभियानले वाचा गरेको थियो। अमेरिका महान् फेरि बनाउन!
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अफगानिस्तानको अचानक भ्रमणको साथ धन्यवाद 2019 मा आफ्ना सेनाहरूलाई भेट्छन्। उनले ट्विट गरेर ठूला मिडिया स्थापना गरे कि उनी गल्फ खेल्ने तर सट्टा एयर फोर्स वनमा अफगानिस्तान गए। प्रेसले अपेक्षा गरे अनुसार आफैंको गधा बनाए.
उनको नाम डोनाल्ड जे ट्रम्प हो। जब उनले ट्रम्प टावरमा आफ्नो अभियानको घोषणा गरे, उनी मिडियाद्वारा आक्रमण गरे र सोशल मिडियाले सेन्सर गरे। जब डोनाल्ड ट्रम्पले 2016 मा ठूलो जित हासिल गरे, यसले गुगलको नेतृत्वमा ठूला-टेक मोनोलिथहरूलाई स्तब्ध बनायो, जसले आफ्नो खोज एल्गोरिदमलाई परिवर्तन गर्यो। सकारात्मक सामग्री गाड्नुहोस् र नकारात्मकलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। जबकि प्रविधिले हाम्रो जीवनमा धेरै सुधार गरेको छ, यो आधुनिक प्रविधिको नकारात्मक पक्ष यो हो कि यसलाई कसरी हेरफेर भइरहेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह सेन्सरशिप उद्देश्य.
डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो वचन राखे र अमेरिकीहरूलाई फेरि गर्व गराए! कम कर्पोरेट करहरूले कर्पोरेटहरूलाई अमेरिका फर्कन प्रलोभन दिए, जुन विश्वव्यापी रूपमा सम्मानित थियो। त्यसपछि Covid-19 आयो जसले अमेरिकाको व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य बनायो। मलाई विश्वास छ कि वुहान प्रयोगशाला चुहावटको पछाडि राजनीति थियो। डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको अर्थतन्त्रबाट ठूलो चोट लिइरहेका थिए। उनीहरूले ट्रम्पको गर्जने अर्थतन्त्रलाई रोक्न र उनलाई अर्को कार्यकाल जित्नबाट रोक्नुपर्‍यो। बाँकी एक निरपेक्ष राजनीतिक दुःस्वप्न हो! 😥
फिडोनेट बीबीएस पहुँच 1991 देखि
ट्रेन्डिङ ब्लग पोस्ट र पृष्ठहरू
जनताको संवैधानिक स्रोत !
प्रतिलिपि अधिकार © FidoSysop.org ~ सर्वाधिकार सुरक्षित